Ifashoni yothando? Iingcebiso ezi-6 zokuYila ezambatho zakho
Ifashoni yothando? Nazi iiNgcebiso ezi-6 zokuYila iimpahla zakho ngokuNwabisa
If Wake waphupha uyila okanye uzenzela ezakho iimpahla, ke uze kwindawo elungileyo. Ukuyila iimpahla zakho kukuvumela ukuba wenze iimpahla ezikufanelayo kwaye zikufanele ngokugqibeleleyo, kunye nelaphu elinobunewunewu elinokubakho kunye nezinto ezininzi ezahlukeneyo zokufunda, alikho ixesha elingcono lokuba uqalise.
Uyilo lwefashoni ngumhlaba ovela rhoqo, ochulumancisayo. Nokuba ufuna ukuba ngumyili oyiphumeleleyo okanye ufuna ukwenza iimpahla zokunxiba wena kunye nosapho lwakho.
Nazi ezinye iindlela zokukunceda uqalise…
# 1. Qala ngokufunda iziseko
Ukuba umtsha ekuyileni iimpahla zakho, emva koko kuya kufuneka kuqala ufunde iziseko. Awudingi ukuba yinkosi yobugcisa ukuze uyile ezakho iimpahla, kodwa kuya kufuneka ukwazi ukunxibelelanisa umbono wakho. Qala ngokujonga uyilo lwabanye abantu ukufumana izimvo. Unokucinga ngokuthatha umzobo okanye udidi lwefashoni yoyilo. Uyenza Njani impahla yakho yokunxiba
Nje ukuba wazi ukuzoba zoyilo, kuya kufuneka funda ukuthunga. Nokuba awuzithungi iziqwenga kunye, kuya kufuneka wazi iziseko zokuthunga. Ukufunda ngeendlela ezahlukeneyo zelaphu, izinto zokubambisa, izixhobo, njl. Njl. Kuya kukunceda kakhulu xa kuziwa ekuyileni iimpahla zakho. Zininzi iipateni zasimahla ezikhoyo kwi-intanethi kubaqalayo. Uyila njani impahla yokunxiba.
# 2. Funda ngemveliso yefashoni Yila iimpahla zakho
Ukuze ukwazi ukuyila impahla oyithandayo kunye nabanye oya kuyithanda, uya kufuna ukufunda kangangoko unakho malunga nomzi mveliso wefashoni. Khumbula, isitayile esidumileyo ngoku sinokungathandeki kwiinyanga ezimbalwa zexesha, ke kufuneka ufunde ukucinga kwangaphambili.
# 3. Funda ukusebenzisa itekhnoloji yoyilo
Itekhnoloji itshintshile kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngoku kukho izixhobo ezingakumbi kunye neapps ezikhoyo kubaqulunqi kunangaphambili. Ke, kunye nokwazi ukudweba kunye nendlela yokuthunga, kuya kufuneka wazi ukuba uzisebenzisa njani ngokuchanekileyo ezi zixhobo. Adobe Illustrator kunye neFotohop yindawo entle ukuba uqale.
# 4. Yila ubugcisa
Lixesha lokuba usebenzise umbono wakho wokuza noyilo olulunge kuwe. Kuya kufuneka ucinge ngesitayile sento leyo, ibala, uhlobo lwendwangu ofuna ukuyisebenzisa, kwaye ukuba ufuna ukongeza naziphi na izinto kwinto yakho. Ukuba uyile into yokubonela abanye abantu, ke kuyakufuneka uyile kubo engqondweni. Umzekelo, ukuba uyila iimpahla zomntwana, kunokuba licebo elihle ukuba ukhethe ilaphu elinxiba nzima elinokuhlamba ngokulula.
# 5. Sebenzisa i-croquis
Xa sele unombono, kuyakufuneka uwudwebe. Uninzi lwabayili befashoni bakhetha ukusebenzisa i-croquis (itemplate yomfanekiso womzimba) ukuze bangachithi ixesha lokuzoba umzobo ixesha ngalinye. Uyila njani impahla yokunxiba.
Nje ukuba ufumane umzobo wenamba, ungaqala ukuzoba ingubo yakho ngaphezulu. Ngumbono olungileyo ukusebenzisa ipensile ukuze ucime iimpazamo ngokulula. Ihlala ingumbono olungileyo ukuzoba ubume bengubo ngaphambi kokuba wongeze iinkcukacha ngaphezulu. Nje ukuba umzobo wakho ugqibe, kuyakufuneka ujikeleze ulwandlalo ngosiba. Ungayifaka umbala uyilo lwakho.
# 6. Thenga i-mannequin
Xa uyilo lwakho lugqityiwe, ungaqala ukwenza impahla yakho yokunxiba. Uninzi lwabaqambi bakhetha ukuthenga i-mannequin okwangoku ngeli nqanaba njengoko ibanceda ukuba bavelise isixhobo esifanelekileyo esimilo somntu. Mannequins aphucule kakhulu kwiminyaka, kwaye ngoku kakhulu enokwenyani ngakumbi kunokwakhiwa kwemveli.
Qala ngokuzoba ipateni yakho ekutsaleni okanye ephepheni, kodwa khumbula ukufaka iilebheli iziqwenga njengoko usiya. Nje ukuba ipateni yakho itsaliwe, ungayisebenzisa ekwenzeni isambatho sempahla yakho. Zoba ngeepateni zakho kwisiqwengana esingabizi kakhulu seal muslin. Unokuthunga iziqwenga kunye ukwenza uhlobo lokuhlekisa yoyilo lwakho. Uyenza Njani impahla yakho yokunxiba
Nje ukuba zonke iziqwenga zithungelwe kunye, uya kuba nakho ukuvavanya uyilo lwakho kwaye wenze naluphi na utshintsho oludingayo. Uyakwazi ke ukuyila kwakhona ngokomxholo owukhethileyo. Kwaye yiyo, uyilo lwakho lokuqala lugqityiwe!
Ngubani ongaphuphi ukuba angazenzela ezakhe iimpahla? Ukuyilwa kweengubo zakho kukuvumela ukuba wenze into eyahlukileyo, efanelwe ngokugqibeleleyo, kunye nento ehambelana neemfuno zakho kunye nesitayile. Endaweni yokuphupha malunga nokuyila into elungele wena, kutheni ungayiniki? Uyila njani impahla yokunxiba.
Imboleko yefoto: Njengokubhaliweyo, Kuthunyelwe isikweletu setyala: Instagram | Viera_amber
ukuyila iimpahla zakho Uyilo lwefashini yokwakha ifowuni Uyile njani impahla yakho Iingcebiso zokuyilwa kweengubo
Uhlobo Rave Agasti 1, 2020
Izitayile ezihamba phambili zezitrato ezivela kwiVeki yeFashoni yeParis yeVeki
Umlingo wamantombazana amnyama! I-Beverly Naya's Takes Takes ziyathandeka
I-Chioma Ikokwu isibonisa indlela yokufumana uninzi lwezinto zoMyili
Izifundo zeSitayile esiqhelekileyo unokufunda kwiToke Makinwa ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka